How to get real hands-on for CCNA Labbing – Cisco Training
How to get real hands-on for CCNA Labbing
April 7, 2015 January 21, 2016 IP6 Networks
CCNA အတွက် Lab တွေစမ်းသည့်နေရာမှာ Lab ချည်းသက်သက်မဟုတ်ပဲ Real Design များနဲ့ ယှဉ်ကာလေ့ကျင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို Lab တာထက် Real ကိုပိုနီးကပ်သွားပါပြီ။ တကယ်လည်း Real အတိုင်းဆိုတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအသုံးတည့် ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း ယုံကြည်မှုပိုလာတာပေါ့ဗျာ
Enterprise Design ဆိုရင် Campus Design အတိုင်း Lab လုပ်နိုင်ပါတယ် Technology သီးသန့် ဆိုပါတော့ ဥပမာ Vlan စမ်းမယ်ဆို devices တလုံး2လုံးထည့် စမ်း ။ ဒါဆို အိုကေပါပြီ။ ဒီနေမှာ devices တွေများဖို့ကအရေးမကြီးပါဘူး. Technology အတွက် hands-on ရဖို့ နားလည်ဖို့ ပါ။ Etherchannel ဆိုပါတော့ ဒီအတိုင်းလုပ်သွားရုံပါပဲ
တော်တော်လည်း သိပြီ Technology တွေတော်တော်များများလည်းစုံပြီဆိုရင်တော့ Real အတိုင်းကအကောင်းဆုံးပါ။ knowledge တိုးမယ် confidence ရပါမယ်။
ပုံလေးထဲကတောအများဆုံးတွေ့နေကြ Design လေးပါ။့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ အသုံးများပါတယ် အများအားဖြင့် small network နဲ့ (( medium network )) မှာပါ သူကလည်း campus design အတိုင်ူတည်ဆောက်ထားတာပါ။ ပုံအရ ဆိုရင် L2switch များကတော့ Access Layer ပါ။ L3 ကတော့ distribution ဖြစ်ပြီး Router ကတော့ Core ပါ။ အများအားဖြင် Small့် နက်ဝက်တွေမှာ core မရှိတက်ဘူး။ ကုန်ကျစရိတ်လည်းလျော့သွားတာပေါ့medium တေမှာလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ်
ပုံမှာ packet tracer နှင့်ပဲ ဆွဲပြထားပါတယ်။ မြင်သာနိုင်အောင်လို့ပါ။ Access . Distribution. Core ဆိုပြီးတော့ ရှိနေရာ Access က Building အတိုင်း ရှိသွားတာကိုပါ ပုံမှာတွေ့ရမှာပါ။ ( အလယ်ပုံပါ။ ဒါကတော့အတော်အသုံးများပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူက Link အပို များမရှိတော Connection့Down ခြင်းတွက်စိုးရမ်စရာပါပဲ။ အဲတော့ ညာဘက်ကပုံလေးအတိုင်း ချိတ်ဆက် ကြပါတယ်။ အဲတော့ ပိုမိုကောင်းမွနါသော Network တခုဖြစ်လာပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနေရာမှာလည်း Router မထားပဲ Firewall ကပိုအသုံးများပြန်ပါတယ်
အဲ Lab လေးအတိုင်း အဲဒီ အတိုင်းဟာ Real အတိုင်းဆိုတော့ ပိုမို လေကျင့်လို့ ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ပုံမှာ Lan Network မှာ မီးတွေအကုန်စိမိ်းနေတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဒါက STP ကြောင့်ပါ။ ဒီပုံလေးအတိုင်း Lab လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Devices တွေနည်းနည်းနဲ့ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိပါတယ်။
Packet Tracer ဟာအစပိုင်းလေ့လာမှုမှာအထောက်အကူ များစွာပြုပါတယ်။ြ
ပီးသွားရင်တော့ Real နဲ့ ပိုမိုနီးစပ်တဲ့ Emulator ဖြစ်တဲ့ GNS3 ကိုအသုံးပြခြင်းဟာ ဆက်လက်လေ့လာမယ့် နေရာမှာ ပိုမိုအထောက်အကူပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
CCNA CCNA Leaveacomment
← CCNA မှာပါဝင်တဲ့ Cisco Configuration Register အကြောင်း
Ping အကြောင်းတစေ့တစောင်း →